VAKY BANTSILANA : Ry « Rabemanaiky » sy ry « Tsimahazomitroatra »… | NewsMada
Asa re, inona loatra ity aretina mahazo antsika vahoaka amin’izao fotoana ity e! Na inona na inona tsy fahaiza-mitantana, na mibaribary tahaka ny inona aza ny kolikoly avo lenta ataon’ireo mpitondrantsika, ny fanaparam-pahefana efa tsy lazaina intsony… isika mianakavy anefa ity mbola eto ihany, toy ny olona voan’ny aretina « rabemanaiky ». Ny sasan’ny tratran’ny vita vakisiny amin’ny tsindrona « tsimahazomitroatra ». Ny any ivelany anefa, vao misy tranga mampiahiahy ny vahoaka, eny an-dalam-be no fotoana. Tsy miantso akory izany hoe andao hidina an-dalam-be sao misy mandika vilana, fa manaitra fotsiny fa toa mahery loatra ny « heri »-n’ilay fanafody natsindrona antsika mianakavy ka sao matory tsy mifoha eo intsony.
Niakatra iny ny vidim-bary, ry rabemanaiky mianakavy tsy misy miteny. Niakatra ny vidin-tsolika, indreo eo ihany. Nivoaka tamin’ny fahanginany indray anefa ny mpianatra tetsy Vontovorona, ry voatsindrona « tsimahazomitroatra » mamoaka resaka fa voakarama ireo mpianatra ireo, nanampy tosika izany ny tetsy Itaosy nolazaina ihany koa fa politika. Fa inona ihany e?
Efa hita mivandravandra izao fa fampandrina adrisa avokoa no ataon’ny fitondrana amin’izao nanomboka tany amin’ny hoe « telo volana ihany dia hivaha ny delestazy e! », « baikoina ny jirama hampijanona ny delestazy e! », « porofoy fa misy mahatra eto » sns… Ny sasany amin’ireny aza toa efa manao tsinotsinona mihitsy amin’ny hoe « miantso ny vahoaka mba hiafy », ny vaoaka anie efa mihafy foana e! ry zatra mihinam-be sy tsy mba mandeha an-tongotra ary ireo tsy mahazaka « embouteillage » no tsy mahay an’izany. Isika anefa ireo eo ihany manaikinaiky foana sy tsy misy miteny. Ny olona manaitra indray no hanaovana avo vava fa manapaka ny torimaso, mbola manofy « mamy » angamba ny sasany.
Toa zaran’ny mpitondra ihany koa anefa, izy ireo tsy misy manelingelina amin’ny zavatra ataony, ry rabemanaiky sy ry tsimahazomitroatra toa mihanoka tsara ihany « ao anatin’ny nofy mamy ». Inona no tadiavina mihoatra an’izay? Mahareta fery daholo e!